Golden aji |	Golden aji |
Golden aji bụ anụmanụ themed online oghere egwuregwu na a dị iche. a UK oghere igwe free online ịgba chaa chaa egwuregwu na-mepụtara NextGen. Player pụrụ nwere fun-akpọ nke a oghere, na ha oge na mma. Mụta ihe site na-agụ nke a nyochaa.
A UK oghere igwe free game About Wild Ịnyịnya
Nke a online UK oghere igwe free ịgba chaa chaa egwuregwu bụ ihe niile banyere ọhịa inyinya. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-akpọ anụ themed ohere mpere, mgbe ahụ, a onye kwesịrị nke ukwuu mmasị gị. Nke a online cha cha oghere bụ ọgaranya na ọdịdị onyinye, dị ka a backdrop mma esịnede a obosara odida obodo, ugwu na n'ígwé ojii.
Enwere 10 paylines, 3 ahịrị na 5 -esi anwụde a oghere. Ị nwere akara na-enye gị ukwuu ụgwọ ọrụ, na ndị na-akpata ị nta ụgwọ ọrụ. The oyiyi nke bara uru karị iso nke nwa ọcha na inyinya, a ugwu, na a osisi.
Ndị nnọchianya ndị na-enye nta ụgwọ ọrụ mgbe ị na-dakọtara ha na-esi anwụde agụnye ọkọlọtọ ebre kaadị. Ndị a bụ ihe nnọchianya na mgbe cha cha oghere egwuregwu ga-eji na-, dị ka A, J, K, Q, 9 na 10 Akara ngosi.
Mmeri na Golden aji
Mmeri a UK oghere igwe free online cha cha ịgba chaa chaa egwuregwu na-agụnye na-abịa na akara na-esi anwụde. Otú ọ dị, e nwere ma Wild na Gbasaanụ oyiyi nke nwere ike inyere ibe gị Ohere nke na-emeri, ma rụọ ọrụ bonus atụmatụ karị.
The Wild akara bụ a Golden aji ọhịa ịnyịnya icon. Nke a na akara ga-agbanwe ọ bụla ọzọ akara ke esi anwụde, na wezụga nke a Silver Horseshoe akara. Nke a na-anọchi anya Gbasaanụ icon nke a oghere na ga-ịkpalite bonus gburugburu mgbe ị dakọtara a nọmba nke akara ke esi anwụde.
The Free spins Daashi Gburugburu
Site ọdịda abụọ Gbasaanụ akara na ma nke na-esi anwụde 2, 3 ma ọ bụ 4 ị ga-rụọ ọrụ Free spins gburugburu. Ị ga-arụ n'etiti 2 na 6 free spins na usoro. The free spins ga-enye gị ọzọ ohere dakọtara elu na akara, ma si otú budata mbo mbuli gị payout.
E nwekwara a Gbasaanụ Run feature nke ahụ na-triggered na random. Nke a UK oghere igwe free cha cha ịgba chaa chaa egwuregwu nwere ihe RTP of 96.96%, nke pụtara na gị payout ga-£ 96,96 maka nke ọ bụla mmeri na a kwa-atụ ogho £ 100 Wager. Ị nwere ike igwu a oghere ọ bụla na ngwaọrụ na njikọ Ịntanetị, na na-agụnye na-akpọ gị PC na gam akporo / iOS mobile ngwaọrụ.
Mega Slots and Games | na- 20 Free spins